Kedu ka Eswatini siri bụrụ njem njem njem nchebe?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Eswatini Na -agbasa Akụkọ » Kedu ka Eswatini siri bụrụ njem njem njem nchebe?
Awards • Na-agbasa News Travel • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Taa ka enyere ndi Eswatini Tourism Authority ihe ndi a Nchekwa njem nlegharị anya by Network Tourism Network (WTN)
Akara a dabere na WTTC Safe Travel Stamps nyere Eswatini na nyocha onwe gị.
Onye isi oche ETA dị mpako, Linda Nxumalo gwara eTurboNews:
Eswatini Tourism Authority (ETA) sooro ndị ọrụ WHO na UN na ndị ọrụ ya na Mịnịsta Ahụike na ndị njem nleta rụọ ọrụ iji guzobe usoro iwu siri ike na usoro nlekọta ahụike na nchekwa nke ndị njem njem na mba a na-esote. Ndị WHO na UN kwadoro, usoro ogbugba ndu ndị a iji hụ na ndị ọbịa niile na mba ahụ nwere ike ịga njem n'enweghị nsogbu ọ bụla ma nwee obere ihe egwu sitere na COVID-19. Dịka nkwenye nke usoro iwu ndị a, Eswatini ghọrọ mba izizi zuru oke na ndịda Afrịka ịnata WTTC Safe Travels Stamp nke nnabata yana ETA na-apụta ugbu a na Stamp gafee ụlọ ọrụ ahụ n'ime Eswatini. ETA egosila na ọ dị mkpa iji nchekwa nke ndị njem nleta ya wee na-agbaso usoro niile dị iji hụ na enwere ike ileta Eswatini ma nwee ọ asụ dịka o kwere mee.
The Safer Tourism Seal ”(STS) na-enye mmesi obi ike ndị ọzọ mgbe ị na-ejegharị n'oge oge ndị a na-ejighị n'aka.
Akara STS na-ewulite obi ike ndị njem maka ebe ndị kachasị mma ma bụrụ ihe ama ama ama n'ụwa niile n'oge nsogbu ndị a. Nchekwa njem na-adabere na onye na-eweta ya na onye nnata Recoghọta eziokwu a.
Akara ejiri na-anọchite anya ndị kasị mma na njem na-egosi na ụwa, na odi mfe njem bụ ọrụ onye ọ bụla.
N’agbanyeghi obodo pere mpe nke pere mpe na ndida ugwu, na obodo nke abuo pere mpe na mpaghara Afrika, Eswatini, a na-akpọbu Swaziland, karịrị ihe na-eme ka enweghị ogo ya nwee ebe dịgasị iche iche na ihe ndọgharị dị iche iche.
Dịka otu n'ime alaeze ole na ole fọdụrụ n'Africa, ọdịbendị na ihe nketa gbanyere mkpọrọgwụ n'akụkụ niile nke ndụ Swazi, na-eme ka ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu nye ndị niile na-eleta. Nakwa ndị bara ọgaranya omenala, omume na-enweghị atụ nke ndị mmadụ na-eme ka ndị ọbịa niile nwee nnabata nke ọma ma dịkwa nchebe. Gbakwunye na nke ahụ mara mma ihe ngosi nke ugwu na ndagwurugwu, oké ọhịa na ala dị larịị; gbakwunyere anụ ọhịa nwere ikike gafee mba ahụ bụ ebe obibi nke Big Five; na ngwakọta na-adọrọ mmasị nke ememme ọgbara ọhụrụ na nke ọdịnala, emume na ihe, na ị nwere ihe niile kachasị mma gbasara Africa n'otu mba pere mpe nke ọma ma nabata.
Oke Osimiri njem Safer bu ihe ndi ozo nke World Tourism Network: www.wtn.travel
Ozi ndi ozo banyere usoro ihe nchebe nke njem nleta: www.safertourismseal.com
More na Eswatini Tourism Authority: www.thekingdomofeswatini.com